I-Sole - Agriturismo-La Fattoria di San Francesco
Ikamelo e-indawo esepulazini ibungazwe ngu-Olga
U-Olga unokuphawula okungu-495 kwezinye izindawo.
I-Fattoria di San Francesco iyindlu yasepulazini entsha eyakhiwe ngothando nothando. Ukudla okukhiqizwa esizeni kuyimvelo. Sikunikeza inani eliphezulu lakho konke ongakufuna endlini yasepulazini ezungezwe imvelo, futhi ungaba nesidlo sasemini nesidlo sakusihlwa lapho konke ukudla kuvela epulazini. I-pool iyatholakala futhi yabelwa ezinye izihambeli. Izivakashi zingahlala ngokuxhumana nemvelo kanye nazo zonke izilwane epulazini, futhi zilungele izingane.
Igumbi lifakwe umoya opholile, i-wifi yamahhala. Ukushintsha amashidi ngokushintsha amathawula kanye nokuhlanza kuzoba ngesicelo ngemali eyengeziwe yama-euro ayi-10 igumbi ngalinye. Ukuhlanza okokugcina kufakiwe enanini lokuhlala ubusuku bonke. Isevisi yokuwasha iyatholakala nokunye okuzovunyelwana ngakho.
Le ndawo itholakala emagqumeni asePietraperzia, enkabeni yeSicily nethuba lokuhamba ngemoto futhi uvakashele zonke izingosi esizozincoma njengeLa Villa Romana del Casale ePiazza Armerina nje imizuzu engama-25 ukusuka lapho. I-Viale dei Templi e-Agrigento kanye ne-Scala dei Turchi emangalisayo cishe imizuzu engama-45. Enna ukuze ubuke i-panorama yezindawo ezinhle kakhulu enkabeni yeSicily.
Ngishiya isikhala kuzo zonke izihambeli zami ngamathuba okunikeza zonke izicelo ukuze zanelise.